ဘဏ္SERVာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူနယူးဇီလန် | NEW ZEALAND တွင်ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ နယူးဇီလန်တွင်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမည်သို့ရယူမည်၊
နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ - နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုရယူပါ။
နယူးဇီလန်အတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်သင်လျှောက်ထားလိုပါကနယူးဇီလန်၏ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံရှိပြီးတတ်နိုင်သောလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်အတွက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်။
# ငွေရေးကြေးရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကို New Zealand ရရှိရန်။
နယူးဇီလန်အတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုနယူးဇီလန်အတွက်ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများရရှိခြင်း၊ နယူးဇီလန်အတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများရရှိခြင်း၊ နယူးဇီလန်အတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်လျှောက်ထားခြင်း၊ နယူးဇီလန်အတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူများ၊ နယူးဇီလန်အတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးဇီလန်အတွက်ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်အတွက်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ၏အကူအညီဖြင့်နယူးဇီလန်အတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အခကြေးငွေများနှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ရရှိရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေး နယူးဇီလန်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အကောင်းဆုံးလိုင်စင်ပေးသူဖြစ်ပါကလျှောက်လွှာကိုလက်ခံပါကကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာ ၁၀၀% အောင်မြင်မှုကိုပေးရန်ဖြစ်သည်။
နယူးဇီလန်တွင်ဘဏ္,ာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ (သို့မဟုတ်) FSP ဟုခေါ်သည့်လိုင်စင်အမျိုးအစားတစ်ခုရှိသေးသည်။ ၎င်းကိုကုန်းတွင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အဖြစ်လူသိများသည်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်နိုင်ငံသို့မဟုတ်မည်သည့်နိုင်ငံတကာငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းမှမဆိုစာရင်းသွင်းခြင်းမရှိပါ။ WEC အဖွဲ့ ၀ င်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။
နယူးဇီလန်မြောက်ပိုင်းကျွန်းသည်အလယ်ဗဟိုမှ ဖြတ်၍ သွားလာနေသောတောင်တန်းများ 'ကျောရိုး' ရှိပြီးနှစ်ဖက်စလုံးတွင်နူးညံ့သောရွေ့လျားနေသောလယ်ယာမြေများရှိသည်။ လည်ပတ်နေသောမီးတောင်နှင့်နွေးထွေးသောဇုန်ဖြစ်သောမီးတောင်ကုန်းပြင်မြင့်တို့ကြောင့်မြောက်ကျွန်းကိုလွှမ်းမိုးထားသည်။ Southernရာမတောင်ပိုင်းတောင်တန်းများသည်တောင်ကျွန်း၏အုတ်မြစ်ကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ တောင်ပိုင်းတောင်တန်းတောင်တန်းများ၏အရှေ့ဘက်တွင် Otago နှင့် Southland ရှိရွေ့လျားလယ်ယာမြေများနှင့် Canterbury Plains များသည်ကြီးမားသည်။
နယူးဇီလန်၏အကျယ်ပြန့်ဆုံးတည်ဆောက်ထားသည့်ကျောက်တုံးများသည်နှစ်ပေါင်းသန်း ၅၀၀ ကျော်သည်တစ်ချိန်က Gondwanaland အတွက်အရေးကြီးသည်။ ဒီကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောစူပါပြည်မကြီးသည်နှစ်ပေါင်းသန်း ၁၆၀ ဝန်းကျင်တွင်စတင်ခွဲခြားခဲ့ပြီးနယူးဇီလန်သည်နှစ်ပေါင်း ၈၅ သန်းဝန်းကျင်ကနေခွဲထုတ်ခဲ့သည်။
နယူးဇီလန်သည်ပစိဖိတ်နှင့်Australianစတြေးလျ - ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပြားနှစ်ခုပေါ်တွင်ထိုင်သည်။ ဤကြီးမားလှသောရွေ့လျားနေသောအဖုဆယ်ဆယ့်ငါးခုသည်ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မြောက်ကျွန်းနှင့်တောင်ကျွန်းအနည်းငယ်တို့သည်သြစတြေးလျကျောက်ပြားပေါ်တွင်ထိုင်ကြပြီးကျန်ကျွန်းများသည်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်ထိုင်ကြသည်။ ဤသံမဏိပြားများသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အစဉ်မပြတ်ရွေ့လျားနေသောကြောင့်နယူးဇီလန်သည်ပထဝီဝင်အနေအထားများစွာရှိသည်။ ဤမြေအောက်လှုပ်ရှားမှုသည်နယူးဇီလန်ကိုအရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်တဲ့ဘူမိအပူစွမ်းအင်ဒေသများနှင့်အချို့သောဇုန်များတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးခြင်းနှင့်ပူနွေးစေခြင်းကဲ့သို့သောသဘာဝရေအောင်းလွှာများကိုလျှော့ချပေးခြင်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ Rotorua သည်ဘူမိအပူစွမ်းအင်၏အဓိကအချက်အချာဖြစ်သည်။ ရွှံ့ရေကန်များ၊ စမ်းရေများနှင့်မြေအောက်ရေအောင်းလွှာများက၎င်း၏နွေးထွေးသောဇုန်များရှိသည့်အပြင်၎င်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ် 'Sulfur City' အနံ့လည်းရှိသည်။ ပထမဆုံးအနေဖြင့် Maori မှအခြေချကာမြေအောက်ရေအောင်းလွှာများကိုချက်ပြုတ်ရန်နှင့်ဆေးကြောရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပူပြင်းသည့်ရေကန်များကြောင့်ကောလာဟလများထွက်ပေါ်လာသည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအားသာချက်များသည်ထိုနယ်မြေကို Cureland ဟူသောအမည်ဖြင့်ချက်ချင်းရရှိခဲ့သည်။
Rotorua ကိုကျော်။ သဘာ ၀ ရေအောင်းလွှာနှင့် Turangi မြောက်ဘက်မြောက်ဘက်ရှိဒေသများစွာတွင် Hanmer Springs နှင့် South Island ရှိအနောက်ကမ်းရိုးတန်းတို့ကဲ့သို့နွေးထွေးသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုသင်တန်ဖိုးထားနိုင်သည်။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည်ကီလိုမီတာ ၁၅၀၀၀ ကျော်သောကြည်နူးဖွယ်ကောင်း။ ပြောင်းလဲသွားသောကမ်းရိုးတန်းရှိသည်။ Far North နှင့်မြောက်ကျွန်းအရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်ရေကူးခြင်း၊ surfing လုပ်ရန်နှင့်နေပူရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောသဲသောင်ပြင်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ မြောက်ကျွန်း၏အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်သဲသောင်များရှိပြီးသဲများသော။ တောင်ကျွန်း၏မြောက်ဘက်တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောသဲသောင်ပြင်များရှိပြီးတောင်ဘက်ကျွန်း၏ကျန်ရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုမိုတောက်ပသောနေရာများဖြစ်လိမ့်မည်။ မြောက်ကျွန်း၏ ၅ ပုံ ၁ ပုံနှင့်တောင်ကျွန်း၏ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်တောင်များဖြစ်သည်။ မြောက်ကျွန်းမြောက်ဘက်မှတောင်ဘက်အောက်ပိုင်းအထိကျယ်ပြန့်သောဤတောင်များကိုသြစတြေးလျနှင့်ပစိဖိတ်ပြားများ၏သက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာတည်ရှိနေသော alluvial စတိုးဆိုင်များ (တောင်များမှမြစ်များမှပြိုကွဲသွားခြင်း) သည်တောင်ကျွန်းရှိကြီးမားသည့် Canterbury Plains နှင့်မြောက်ဘက်ရှိကျိုးနွံမှုရှိသည့်လယ်ကွင်းများကိုပုံသွင်းသည်။ ဤ alluvial လယ်ယာမြေများနယူးဇီလန်၏ယေဘုယျအားဖြင့်တီထွင်ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိသောလယ်ယာမြေအချို့ကိုပါဝင်သည်။ နယူးဇီလန်၏တောင်ပိုင်းအဲလ်ပ်တောင်တန်းသည်အမျိုးမျိုးသောရေခဲတုံးများရှိသည်။ ၎င်းသည်အကြီးဆုံးက Tasman ရေခဲအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကွတ်ခ်တောင်တန်းမှအဝေးပြေးလမ်းလျှောက်ခြင်းအားဖြင့်သင်မြင်နိုင်သည်။ နယူးဇီလန်၏ကျော်ကြားလှသောရေခဲထုများသည်တောင်ကျွန်း၏အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းရှိဖရန့်ဂျိုးဇက်နှင့် Fox တို့ဖြစ်သည်။ ရေခဲတုံးများရွေ့လျားခြင်းဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဆွဲဆောင်ထားသောဤအံ့ဖွယ်ရေခဲထုများသည်တောင်တက်သမားများနှင့်စူးစမ်းရှာဖွေသူများအတွက်ထိရောက်စွာဖွင့်နိုင်သည်။ သင်ရေခဲထုများထံချဉ်းကပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဟီလီတောင်တက်နိုင်သည် - ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်တက်။ ဆင်းသွားနိုင်သည်။ နယူးဇီလန်သည်ဝေးလံသောဒေသဖြစ်ပြီးပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၏အရှေ့တောင်ပိုင်းရှိကျောက်တုံးများစုဝေးရာနေရာဖြစ်သည်။ အခြေခံကျကျကျွန်းနှစ်ကျွန်းဖြစ်သောမြောက်နှင့်တောင်ကျွန်းများကိုကွတ်ရေလက်ကြားမှသီးခြားစီထားသည်။ အနီးဆုံးအိမ်နီးချင်းစတြေးလျသည်မိုင် ၁၀၀၀ (ကီလိုမီတာ ၁၆၀၀) ဝေးသည်။
အဆိုပါကျွန်းများကိုမီးတောင်အင်အားကြီးများကပင်လယ်ပြင်မှတွန်းထုတ်ခဲ့သည့်အချိန်မတိုင်မီနှစ်ပေါင်း ၂၃ သန်းသာရှိခဲ့သည်။ နယူးဇီလန်တွင်မီးတောင် ၅၀ ကျော်ရှိသည်။ အချို့မှာယနေ့အချိန်အထိလှုပ်ရှားနေဆဲဖြစ်သည်။ စူးရှသောစောင်အထွတ်အထိပ်များ၊ ကြမ်းတမ်းသောကမ်းခြေများနှင့်လယ်ကွင်းများသည်အလွန်ကောင်းသောမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
တောင်ပိုင်းကျွန်းသည်နယူးဇီလန်၏ထင်ရှားကျော်ကြားဆုံးတောင်ထိပ်ဖြစ်ပြီးကွတ်ခ်တောင် (Mount Cook) သည် ၁၂,၃၁၆ ပေ (၃,၇၅၄ မီတာ) အထိမြင့်တက်ပြီး Maori လူမျိုးများက“ Cloud Piercer” ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။ နယူးဇီလန်သည်၎င်း၏ဝေးလံသောဒေသများကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားနေရာများတွင်မတွေ့မြင်ရသည့်ထူးခြားသောဘ ၀ ၌မွေ့လျော်သောဘဝ၌နေထိုင်သည်။ နီးပါးကုန်းသတ္တဝါအားလုံးသည်ငှက်များဖြစ်ကြပြီး၎င်းမျိုးစိတ်အတော်များများသည်ပျံသန်းနိုင်စွမ်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည်။ မော်ရီလူမျိုးများနှင့်ဥရောပရှေ့ဆောင်များသည်သတ္တဝါများကိုကျွန်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ပြီးပျံသန်းနိုင်သောပျံတတ်သောတိရိစ္ဆာန်များသည်သူတို့ကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်ကြပါ။
မကြာသေးမီနှစ် ၁၀၀၀ အတွင်းကျွန်းများပေါ်ရှိသတ္တဝါအားလုံး၏ထက်ဝက်သည်ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းနှင့်အမှိုက်သရိုက်များမှသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းသည်ကျီဝီသတ္တဝါများအပါအ ၀ င်အလွန်များပြားသောမျိုးစိတ်များကိုထပ်မံအားနည်းစေပါသည်။ ထက်နည်း 1,000 ရိုင်းကီဝရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ Kokapo, Kokako, Kiwi နှင့် Tuatara တို့အပါအ ၀ င်တိရစ္ဆာန်အုပ်စုအချို့ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်။
လင်းနို့များသည်ပင်လယ်ဖြတ်ကူးရာတစ် ဦး တည်းသောကုန်းမြေပူနွေးသောတိရိစ္ဆာန်များဖြစ်သည်။ သားရဲသတ္တဝါများနှင့်တွားတတ်သောတွားသွားသတ္တဝါများဥပမာ - weta သည်ကျွန်းများပေါ်ရှိနွေးထွေးသောတိရစ္ဆာန်များ၏အပေါက်ကိုဖြည့်ရန်တီထွင်ခဲ့သည်။ ၂.၅ အောင်စ (၇၀ ဂရမ်) တွင်ရှိသောနဂါး weta သည်မောက်စ်ထက်အဆများစွာအကြိမ်တိုင်းတာသည်။ ၎င်းသည်ပုရစ်ဆွေမျိုးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံး bug တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သည်။
လေယာဉ်မှူးနှင့်ခလုတ်ခုံဝေလငါးများသည်ကျွန်းများသို့ချဉ်းကပ်ရန်ချဉ်းကပ်လာကြသည်။ orcas သည်လင်းပိုင်များထံမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိသည်။
ဘဏ္financialာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်နယူးဇီလန်အတွက်ဘဏ္providersာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ဘဏ္consultာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်နယူးဇီလန်၊ ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုနယူးဇီလန်၊ ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်နယူးဇီလန်၊ ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်လျှောက်လွှာ၊ နယူးဇီလန်၊ ဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူနယူးဇီလန်၊ ဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနယူးဇီလန်၊ ဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူနယူးဇီလန်ကိုရ service provider နယူးဇီလန်၊ Securities Dealers လိုင်စင်နယူးဇီလန်၊ Securities Dealers လိုင်စင်နယူးဇီလန်ရရှိ၊ Securities Dealers လိုင်စင်နယူးဇီလန်ရရှိ၊ Securities Dealers လိုင်စင်နယူးဇီလန်လျှောက်ထား၊ Securities Dealers လိုင်စင်နယူးဇီလန်လျှောက်ထား၊ Securities Dealers လိုင်စင်နယူးဇီလန်, Forex Brokerage လိုင်စင်နယူးဇီလန်, Forex ပွဲစားလိုင်စင်နယူးဇီလန်ရရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်နယူးဇီလန်ရ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်နယူးဇီလန်လျှောက်ထား, Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်နယူးဇီလန်များအတွက်လျှောက်လွှာ, Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်နယူးဇီလန်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ကုန်ကျစရိတ် Forex brokerage လိုင်စင်နယူးဇီလန်, Forex လဲလှယ်လိုင်စင်နယူးဇီလန်, Forex လဲလှယ်လိုင်စင်နယူးဇီလန်ရယူ Forex လဲလှယ်လိုင်စင်နယူးဇီလန်၏, Forex လဲလှယ်လိုင်စင်နယူးဇီလန်လျှောက်ထား, Forex လဲလှယ်လိုင်စင်နယူးဇီလန်လျှောက်ထား, Forex လဲလှယ်လိုင်စင်နယူးဇီလန်, လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်နယူးဇီလန်၊ Forex ပွဲစားလိုင်စင်နယူးဇီလန်၊ Forex ပွဲစားလိုင်စင်နယူးဇီလန်ကိုရယူပြီး Forex ပွဲစားလိုင်စင်နယူးဇီလန်ရမယ် Forex Broker လိုင်စင်နယူးဇီလန်လျှောက်ထား Forex ပွဲစားလိုင်စင်နယူးဇီလန်လျှောက်လွှာ, Forex Broker လိုင်စင်နယူးဇီလန်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း , Forex Broker လိုင်စင်နယူးဇီလန်၏ကုန်ကျစရိတ်, fx လိုင်စင်နယူးဇီလန်, fx လိုင်စင်နယူးဇီလန်ရယူရန် နယူးဇီလန်၊ fx လိုင်စင်နယူးဇီလန်ကိုရယူပါ၊ fx လိုင်စင်နယူးဇီလန်ကိုလျှောက်ထားပါ၊ နယူးဇီလန်တွင် fx လိုင်စင်လျှောက်ထားပါ၊ နယူးဇီလန်လိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ နယူးဇီလန်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အတိုင်ပင်ခံများသည်အဖွဲ့ ၀ င်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ရန်အတွက်နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်များပေးသည်။
နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ရှေ့ဆက်မလုပ်ဆောင်မီလုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိခြင်း၊ KYC နှင့်သင့်လျော်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း။
နယူးဇီလန်အတွက်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများရရှိရန်လျှောက်လွှာနှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများကိုဖြည့်စွက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်လျှောက်ထားပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်အာဏာပိုင်များနှင့်နိဂုံးချုပ်သည်။
လိုင်စင်ချခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနယူးဇီလန်
FSP လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုနယူးဇီလန်တွင်လိုင်စင်ချထားရမည်၊ အကြောင်းမှာဤရွေးချယ်မှုသည်နိုင်ငံတကာဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဖွင့်မရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာများသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များ၏နေထိုင်ခွင့် (သို့) နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ။
FSP လိုင်စင်သည်လိုင်စင်ရရှိသူကိုအောက်ပါအဓိကဘဏ္activitiesာရေးလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် -
ဘဏ္Markာရေးစျေးကွက်များအာဏာပိုင် (သို့) FMA နှင့်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သူများသည်လိုင်စင်ရသူသည်ဒေသန္တရရုံးခန်းဖွင့်ရန်နှင့်ကုမ္ပဏီလိပ်စာသို့ရောက်ရှိရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအခြေအနေအသစ်များကိုမကြာသေးမီကမှလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ရှိသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုံးတစ်ခုလိုအပ်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏လိုအပ်ချက်ကိုလိုက်နာရန်တိုင်ကြားချက်ရရှိပါကစီးပွားရေးလိပ်စာစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်၎င်း၏ ၀ န်ထမ်းများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာစုံစမ်းမှုများကိုစစ်ဆေးစဉ် FMA ၏တာဝန်ရှိသူများသည်မည်သည့်ပြproblemsနာကိုမှမရင်ဆိုင်ရပါ။
ကမ်းလွန်လိုင်စင်သည် FMA မှသတ်မှတ်ထားသောတရားဝင်သတ်မှတ်ချက်များကိုအပြည့်အ ၀ လိုက်နာမည်ဖြစ်ပြီး FSP လိုင်စင်ကိုဖြစ်နိုင်သမျှကာလတိုအတွင်းလွယ်ကူစွာရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Offshorelicense အဖွဲ့၏ပံ့ပိုးမှုသည်ထိရောက်သောမှတ်ပုံတင်မှုသေချာစေရန်နှင့်ညွှန်ကြားချက်အားလုံးကိုလိုက်နာရန်သေချာသည်။
ဘာကြောင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတွေကိုလိုင်စင်ချပေးတာလဲ။
နယူးဇီလန်၏ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ နယူးဇီလန်၏ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ နယူးဇီလန်၏ဘဏ္providersာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်နယူးဇီလန်၏ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအားကျွန်ုပ်တို့အားငှားရမ်းသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရိုးသားသားကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနှင့်သင်၏ရရှိရေးအတွက်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအားကိုးနိုင်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်နယူးဇီလန်၏ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကို“ ငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာငွေထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကဆက်ဆံရေးကိုရတယ်၊ ပိုက်ဆံကအလိုအလျောက်ဖြစ်တယ်။ ငါတို့အားလုံးဝင်ငွေရမယ်။ ဒါပေမယ့်သင်နဲ့ငါတို့ဖောက်သည်တွေကအရမ်းအရေးကြီးတယ်၊ ဤမျှလောက်များစွာသောထပ်ခါတလဲလဲ clients များနှင့်ရည်ညွှန်းရ။ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုဈေးကွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်နယူးဇီလန်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်စျေးပေါတဲ့လိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများရှာဖွေနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲကနံပါတ်တစ်ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာပါတယ်။
နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုဈေးကွက်ကိုကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်နယူးဇီလန်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်စျေးပေါတဲ့လိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများရှာဖွေနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲကနံပါတ်တစ်ရွေးချယ်မှုဖြစ်လာပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်စျေးအချိုဆုံးငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိဘဏ္providersာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ဈေးအသက်သာဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအတိုင်ပင်ခံများ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်နယူးဇီလန်ရှိငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်ဈေးအသက်သာဆုံးအတိုင်ပင်ခံများ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ Ne ။ လိုင်စင် w Zealand, နယူးဇီလန်ရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex Brokerage လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်စျေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးဥပဒေအကြံပေးများ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်နယူးဇီလန်ရှိ Forex Brokerage လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်မှုလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်မှုလိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်ပင်ခံများ၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်တွင်လိုင်စင်၊ Forex ဖလှယ်မှုအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex Broker လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex Broker လိုင်စင်အတွက်အသက်သာဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex Broker လိုင်စင်အတွက်အသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်တွင်ပွဲစားလိုင်စင်၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်အတွက်အသက်သာဆုံးရှေ့နေများနယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင်အတွက်ဈေးအသက်သာဆုံးအကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင်အတွက်အနိမ့်ဆုံးဥပဒေအကြံပေးများ၊
သိရန်လိုအပ်သည် - နယူးဇီလန်၏ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အင်္ဂါရပ်များနှင့်လိုင်စင်သတ်မှတ်ချက်များ
အနည်းဆုံးအစုရှယ်ယာရှင်တစ် ဦး (နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တရား ၀ င်ခွင့်ပြုချက်များခွင့်မပြုပါ)
အနည်းဆုံးဒါရိုက်တာတစ် ဦး (သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အနည်းဆုံးဒေသခံဒါရိုက်တာတစ် ဦး သို့မဟုတ်မည်သည့်ဥပဒေပြcountry္ဌာန်းနိုင်ငံ၏နေထိုင်သူ၊ ထိုပြဌာန်းထားသောနိုင်ငံတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာဖြစ်သည်)
28% Forex လိုင်စင်များအတွက်ကော်ပိုရိတ်ဝင်ငွေခွန်နှုန်း
၁၅% ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအခွန်နှုန်း (GST, VAT နှင့်ဆင်တူ) သည်လူနေအိမ်ငှားရမ်းခများနှင့်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်အသုံးမပြုပါ
နှစ်ဆအခွန်ရှောင်မှုရှောင်ရှားခြင်း (DTA) သဘောတူစာချုပ်များကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
စာရင်းကိုင်နှစ်ကို 1 ရက်နေ့တွင်စတင်ခဲ့သည်st ofပြီလ
နာမည်တစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်သည့်အခါတိုင်း“ and” for“ and”; “ နံပါတ်” အတွက်“ no”၊ "ကုမ္ပဏီ" အတွက် "co" သို့မဟုတ် "coy"; “ နယူးဇီလန်” အတွက်“ NZ” သို့မဟုတ်“ NZ”; ညီအစ်ကိုများအတွက်“ Bros”
ဒေသခံဥပဒေရေးရာ entity ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း
လျှောက်လွှာကိုလုပ်ဆောင်နေပြီး FMA ကိုခြွင်းချက်မရှိအတည်ပြုချက်ပေးသည်
လိုင်စင်ရရှိရန်အတွက် ရေနံချောင်း လိုအပ်သောလျှောက်လွှာပုံစံများကိုဖြည့်စွက်ပြီးဖြည့်စွက်ထားသည့်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူပိုင်ရှင်၊ အစုရှယ်ယာ၊ မန်နေဂျာ၊ အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအတွင်းရေးမှူးအတွက်
လူနေအိမ်လိပ်စာကိုထောက်ခံစာ (အထောက်အပံ့ဖြတ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ဘဏ်ရှင်းတမ်း) ။
ရှေ့နေ / CA ရည်ညွှန်းစာ
သက်ဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်စည်းမျဉ်းဥပဒေအာဏာပိုင် (သို့) ပြည်တွင်းဘဏ်သည်အချိန်မရွေးထပ်ဆောင်းစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်နိုင်သည်.
နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်ဘဏ္ingာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်လိုင်စင်ချထားခြင်းအတွက်ငြင်းဆိုခြင်း
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ငွေကြေးခ ၀ ါချခြင်း၊ ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုကိုနယူးဇီလန်၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သော Client များကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ပံ့ပါ။
ငါတို့နောက်လိုက်တယ် FATF စည်းမျဉ်းများ ကျွန်ုပ်တို့၏နယူးဇီလန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်အလွန်တင်းကြပ်စွာ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
ငွေကြေးဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနယူးဇီလန်ကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ချိသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ နယူးဇီလန်တွင်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုရယူပါ.
ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုနယူးဇီလန်၏ဘဏ္providersာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမှာနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်လျှောက်ထားပါ နယူးဇီလန်နှင့်ဘဏ္andာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုနယူးဇီလန်တွင်အသုံးပြုပါ။
ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ဘဏ္providersာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောဥပဒေအရအမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသောတရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမရှိပါ။ ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများဆည်းပူး နယူးဇီလန်သည်။
ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကိုနယူးဇီလန်၏ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများရရှိရန်အကူအညီလိုသည်။
အီးယူနှင့်နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်နယူးဇီလန်ရှိကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများရောင်းဝယ်သူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်ဘဏ္providersာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အီးယူနှင့်ကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအားထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောနျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အကြံပေးသူများကထောက်ပံ့ပေးသောနယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ဘို့နှင့်နယူးဇီလန်ရဲ့ဖြည့်ချင်တယ် ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးလျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအားညစ်ညမ်းစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမပေးပါ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရဲ့ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွေကိုရယူလိုက်ပါ.
နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေးပါ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်လျှောက်ထားပါ.
နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအားဝယ်ယူခြင်း.
အောက်ဖော်ပြပါအမျိုးအစား (များ) ကိုနယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးကူညီခြင်းမရှိပါ။
ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူအတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနယူးဇီလန်ကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ချိသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ, ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ နယူးဇီလန်တွင်ဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူကိုရယူပါ.
ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုနယူးဇီလန်၏ဘဏ္providerာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးလျှောက်ထား နယူးဇီလန်နှင့်ဘဏ္andာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနယူးဇီလန်ဘဏ္financialာရေးဝန်ဆောင်မှုတွင်အသုံးပြုသည်။
ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနယူးဇီလန်ရှိဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသူများသည်ဥပဒေအရအမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသောတရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားမထောက်ပံ့ပါ။ ဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူဆည်းပူး နယူးဇီလန်သည်။
ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုနယူးဇီလန်၏ဘဏ္providerာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်ဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူရရှိရန်အကူအညီလိုသည်။
နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကိုအီးယူနှင့်ကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကိုနယူးဇီလန်ရှိကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည်နယူးဇီလန်ရှိကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကနယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်ဘဏ္providerာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနယူးဇီလန်ရှိငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကိုပေးအပ်ခြင်း၊ ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ဘို့နှင့်နယူးဇီလန်ရဲ့ဖြည့်ချင်တယ် ဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးပေးလျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်နယူးဇီလန်ရှိညစ်ညမ်းစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူကိုရယူပါ.
နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နေသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေးပါ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအတွက်လျှောက်ထားပါ.
နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများကိုသော်လည်းကောင်း၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူကို ၀ ယ်ယူခြင်း.
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Securities Dealers License service ကိုအောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
လုံခြုံရေး၊ ရောင်းဝယ်သူများအတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုလိုင်စင်နယူးဇီလန်ကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်လုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်ရယူပါ.
ဘဏ္surveillanceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ကုမ္ပဏီများသည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ Securities Dealers များလိုင်စင်ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စယများတပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမရှိပါ။ Securities မှရောင်းဝယ်ရေးလိုင်စင်လျှောက်ထား နယူးဇီလန်တွင်ရှိပြီး Securities Dealers License New Zealand တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Securities Dealers License ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် Securities Dealers License အတွက်နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည်တရားမ ၀ င်ရာဇ ၀ တ်မှုသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုများကိုနယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers License လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောတရားမ ၀ င်ရာဇ ၀ တ်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ Securities မှရောင်းဝယ်ရေးလိုင်စင်ဆည်းပူး နယူးဇီလန်သည်။
ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုနယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပဲနယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers License ကိုရရှိရန်အကူအညီလိုသည်။
EU နှင့် Offshore Securities Dealers များနယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers များလိုင်စင်အတွက်အထောက်အပံ့ကိုနယူးဇီလန်ရှိကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်လုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည်နယူးဇီလန်ရှိ Securities Dealers လိုင်စင်ရှိကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများမှနယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်လူ ၀ န်ထမ်းများ၊ ကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ဘို့နှင့်နယူးဇီလန်ရဲ့ဖြည့်ချင်တယ် Securities မှရောင်းဝယ်ရေးလိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်ကိုရယူပါ.
နယူးဇီလန်ရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နေသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေး နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ.
နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers လိုင်စင်၏ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူများအား (သို့) ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည်မဟုတ်သလို နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များလိုင်စင်ကိုရယူခြင်း.
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုနယူးဇီလန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မပံ့ပိုးပါ။
Forex Brokerage လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရယူပါ.
ဘဏ္surveillanceာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနယူးဇီလန်၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ Forex ပွဲစားလိုင်စင်လျှောက်ထား နယူးဇီလန်တွင်ရှိပြီး Forex Brokerage License နယူးဇီလန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex Brokerage License ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
Forex Brokerage လိုင်စင်အတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုနယူးဇီလန်တွင် Forex Brokerage လိုင်စင်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသူများသည်ဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုဆည်းပူး နယူးဇီလန်သည်။
နယူးဇီလန်၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်ဘဏ္ာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောဝန်ဆောင်မှုများသည်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ထားခြင်းမရှိဘဲနယူးဇီလန်တွင် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရရှိရန်အကူအညီလိုသည်။
နယူးဇီလန်ရှိ EU နှင့် Offshore Forex ပွဲစားလိုင်စင်အထောက်အပံ့အားနယူးဇီလန်ရှိကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန် Forex အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအားကုမ္ပဏီများအားနယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည်နယူးဇီလန်ရှိ Forex Brokerage လိုင်စင်ရှိကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများမှနယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်လူ၊ ကုန်ပစ္စည်းများကိုကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ဘို့နှင့်နယူးဇီလန်ရဲ့ဖြည့်ချင်တယ် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်နယူးဇီလန်ရှိ Forex Brokerage လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရယူပါ.
နယူးဇီလန်ရှိ Forex Brokerage လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေး နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမရှိကြပါ။ နယူးဇီလန်၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်.
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားနယူးဇီလန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့မထောက်ပံ့ပါ။
Forex Exchange အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုလိုင်စင်နယူးဇီလန်ကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ, ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရယူပါ.
ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကို Forex လဲလှယ်ခြင်းအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ Forex လဲလှယ်လိုင်စင်လျှောက်ထား နယူးဇီလန်နှင့် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်နယူးဇီလန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex Exchange လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
Forex Exchange လိုင်စင်အတွက်ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် Forex Exchange လိုင်စင်အတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောဥပဒေအရအမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသောတရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားနယူးဇီလန်သို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ Forex လဲလှယ်လိုင်စင်ဆည်းပူး နယူးဇီလန်သည်။
ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနယူးဇီလန်၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပဲနယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန်အကူအညီလိုသည်။
အီးယူနှင့်ကမ်းလွန် Forex လဲလှယ်ခြင်းကိုနယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုနယူးဇီလန်ရှိကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဓာတုပစ္စည်းများရောင်းဝယ်လိုသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအားကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည်နယူးဇီလန်ရှိ Forex exchange လိုင်စင်ရှိကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပါအဝင်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကနယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကုန်သွယ်ခြင်း၊ မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ဘို့နှင့်နယူးဇီလန်ရဲ့ဖြည့်ချင်တယ် Forex လဲလှယ်လိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။ နယူးဇီလန်၏ Forex လဲလှယ်လိုင်စင်ကိုရယူပါ.
နယူးဇီလန်ရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်ရောင်းလိုသောတစ် ဦး ချင်းစီ (သို့) ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေး နယူးဇီလန်၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
နယူးဇီလန်ရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမရှိကြပါ။ နယူးဇီလန်၏ Forex လဲလှယ်လိုင်စင်ကိုဝယ်ယူ.
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားနယူးဇီလန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex ပွဲစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်မဟုတ်ပါ။
Forex Broker လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သည်များ၊ လက်နက်ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex ပွဲစားလိုင်စင်ရယူပါ.
ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနယူးဇီလန်၏ Forex Broker လိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ Forex ပွဲစားလိုင်စင်လျှောက်ထား နယူးဇီလန်နှင့် Forex Broker လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုနယူးဇီလန်တွင်အသုံးပြုပါ။
Forex Broker လိုင်စင်အတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုနယူးဇီလန်ရှိ Forex Broker လိုင်စင်အတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အတွက်နယူးဇီလန်အားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုဆည်းပူး နယူးဇီလန်သည်။
ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနယူးဇီလန်၏ Forex ပွဲစားလိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ထားခြင်းမရှိဘဲနယူးဇီလန်တွင် Forex ပွဲစားလိုင်စင်ရရှိရန်ကူညီလိုကြသည်။
နယူးဇီလန်ရှိ EU နှင့် Offshore Forex ပွဲစားလိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုနယူးဇီလန်ရှိ Forex Broker လိုင်စင်အတွက်အထောက်အပံ့များကိုနယူးဇီလန်ရှိကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးလိုသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည်နယူးဇီလန်ရှိ Forex Broker လိုင်စင်ရှိကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများရရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများကနယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်အတွက်ပေးအပ်ထားသည့် Forex Broker လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကုန်သွယ်ခြင်း၊ မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ဘို့နှင့်နယူးဇီလန်ရဲ့ဖြည့်ချင်တယ် Forex ပွဲစားလိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်နယူးဇီလန်ရှိ Forex Broker လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုရယူပါ.
နယူးဇီလန်ရှိ Forex Broker လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ကိုင်နေသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေး နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
နယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမရှိကြပါ။ နယူးဇီလန်၏ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်.
အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားနယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ fx လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်မဟုတ်ပါ။
fx လိုင်စင်အတွက်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနယူးဇီလန်ကိုကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ချိသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ, ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊ နယူးဇီလန်တွင် FX လိုင်စင်ရယူပါ.
ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနယူးဇီလန်၏ fx လိုင်စင်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ FX လိုင်စင်လျှောက်ထားပါ နယူးဇီလန်နှင့် fx လိုင်စင်နယူးဇီလန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ fx လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
fx လိုင်စင်အတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနယူးဇီလန်နိုင်ငံသည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ fx လိုင်စင်အတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်စွက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုသောဥပဒေအရနာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းထားသည့်တရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ FX လိုင်စင်ကိုရယူပါ နယူးဇီလန်သည်။
ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနယူးဇီလန်၏ fx လိုင်စင်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပဲနယူးဇီလန်တွင် fx လိုင်စင်ရရှိရန်အကူအညီလိုသည်။
နယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင်ကို EU နှင့် Offshore fx လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုနယူးဇီလန်ရှိကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်ဆက်ဆံလုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့်နယူးဇီလန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ offshore fx လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ fx လိုင်စင်ရှိကမ်းလွန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ရှေ့နေများ၊ ရှေ့နေများနှင့်အတိုင်ပင်ခံများမှနယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သွယ်ရေး၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ လူနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ခြင်း၊ သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်နယူးဇီလန်ရဲ့ဖြည့်ချင်တယ် FX လိုင်စင်လျှောက်လွှာ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်နယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင်အထောက်အပံ့ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ နယူးဇီလန်၏ fx လိုင်စင်ကိုရယူပါ.
နယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်ပိရမစ်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နေသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအားအထောက်အပံ့မပေးပါ နယူးဇီလန်၏ fx လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ.
နယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ နယူးဇီလန်၏ fx လိုင်စင်ကိုရယူခြင်း.
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးဇီလန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအား ၀ ယ်ယူရန်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက်မည်သည့်တာဝန် (များ) ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမပြုမီထို site အသုံးပြုသူများအားသင့်တော်သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနယူးဇီလန်။
နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအပြင်အောက်ဖော်ပြပါကဏ္forများနှင့်တရားစီရင်မှုအမျိုးမျိုးတွင်လည်းလိုင်စင်ချပေးသည်။
နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်လျှောက်ထားသောအခါနယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်လိုင်စင်ချပေးခြင်းနှင့်စတင်သော်လည်းနယူးဇီလန်ရှိ HR အထောက်အပံ့ကိုတိုးချဲ့သည့်ကျယ်ပြန့်သောအထောက်အပံ့များကိုလည်းပေးသည်။
နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အခမဲ့အကြံပေးခြင်း၊ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ နယူးဇီလန်ရှိငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံး Securities Dealers လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Securities ကားရောင်းဝယ်သူများလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ။ နယူးဇီလန်ရှိ Forex Brokerage လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်၊ အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ r နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ရေးလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ အကောင်းဆုံးအကြံပေးသူများအတွက်) နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံး၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၊ နယူးဇီလန်၏အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex Broker လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်တွင်အကောင်းဆုံး fx လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ fx အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ နယူးဇီလန်တွင်လိုင်စင်၊ နယူးဇီလန်တွင် fx လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးဇီလန်တွင် fx လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ bes နယူးဇီလန်ရှိ FX လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ။
နယူးဇီလန်ဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အခြားထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှုများ
နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွက်လိုင်စင်ခွင့်ပြုခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းမှုအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာ!
ငါတို့အကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု နယူးဇီလန်နှင့် 108 နိုင်ငံများအဘို့။
ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများသည်လည်းကူညီနိုင်သည် ဘဏ်အကောင့် နယူးဇီလန်နှင့် 108 နိုင်ငံများတွင်ဖွင့်လှစ်။
နယူးဇီလန်ကိုလိုင်စင်ချပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင်လမ်းညွှန်မှုလည်းပေးသည် အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံ.
VoIP ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည် ဖုန်းနံပါတ် စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းနှင့်အတူနယူးဇီလန်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဖောက်သည်များ။
လိုအပ်ပါတယ် ရောင်းရန်ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း နယူးဇီလန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်စင်ရကိုယ်စားလှယ်များသည်နယူးဇီလန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်သင့်အားဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့၏ လူ့အင်အားအရင်းအမြစ် နယူးဇီလန်ရှိအတိုင်ပင်ခံများသည်သင်၏ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအပြီးအထူးဖြေရှင်းချက်များပေးသည်
ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောအကူအညီဖြင့်နယူးဇီလန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုလည်းထောက်ပံ့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုစတင်ခြင်း နယူးဇီလန်၌တည်၏။
အကောင်းဆုံး နယူးဇီလန်ရှိစာရင်းကိုင် နယူးဇီလန်အတွက်စာရင်းကိုင်အထောက်အပံ့အတွက် ၂၄ * ၇ ကိုရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၆) နိုင်ငံမှငွေစာရင်းများပြင်ပ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
များအတွက်အတန်းထောက်ခံမှုအတွက်အကောင်းဆုံး အဆင်သင့်ကုမ္ပဏီ နယူးဇီလန်နှင့် 109 နိုင်ငံများတွင်။
နယူးဇီလန်သို့စွန့် ဦး တီထွင်လုပ်ငန်းရှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး
ကိုလိုက်ရှာသည် လုပ်ငန်းရှင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နယူးဇီလန်သို့၊ ၁၀၇ နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအခမဲ့တိုင်ပင်ပါ။
သင်၏အဓိက ၀ န်ထမ်းများအားနယူးဇီလန်တွင်နေရာချထားရန်နှင့်ထောက်ပံ့ရန်လိုအပ်သည် အလုပ်ဗီဇာ နယူးဇီလန်အတွက်ဒါရိုက်တာများသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများအတွက်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကို software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အောင်မြင်စွာကူညီနိုင်ခဲ့သည် web development နယူးဇီလန်နှင့် blockchain, IOT, web, ecommerce နှင့် app များပါ ၀ င်သည့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံသည်စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းဖြင့်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးအရည်အသွေးအဆင့်ရှိကြသည်။
နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် ၀ န်ဆောင်မှုများရရှိသောဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်တောင်းခံပါ။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ
နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုကူညီရန်သင်ကူညီနိုင်မလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးဇီလန်၏ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိရန်အတွက်နယူးဇီလန်အတွက်ဘဏ္providersာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီပေးနေသည်။
နယူးဇီလန်အတွက်ဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကိုရယူပါ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္financialာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်လျှောက်ထားပါ နယူးဇီလန်တွင်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုရယူပါ
နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ကုမ္ပဏီမှလည်းကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်ပါသလား။
ဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည်နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကနယူးဇီလန်၏ဘဏ္providerာရေးဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသူအားလျှောက်ထားရန်နှင့်ရယူရန်အတွက်နယူးဇီလန်အတွက်ဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်သင်ကူညီနိုင်သည်။
နယူးဇီလန်အတွက်ဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူကိုရယူပါ နယူးဇီလန်ရှိငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လျှောက်ထားပါ နယူးဇီလန်တွင်ဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူကိုရယူပါ
နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှ Securities Dealers License ရရှိရန်သင်ကူညီနိူင်ပါသလား။
Securities Dealers လိုင်စင်သည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကနယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ Securities Dealers License ကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရယူခြင်းတို့တွင်နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွက် Securities Dealers License ကိုသင့်အားကူညီပေးနိုင်သည်။
နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွက်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကိုရယူပါ နယူးဇီလန်ရှိလုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်လျှောက်ထားပါ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင် Securities Dealers License ကိုရယူပါ
နယူးဇီလန်မှ Forex Brokerage လိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းကူညီနိုင်မလား။
Forex ပွဲစားလိုင်စင်သည်နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပါကနယူးဇီလန်၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိရန်အတွက်နယူးဇီလန်အတွက် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်နှင့်သင်ကူညီနိုင်သည်။
နယူးဇီလန်အတွက် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရယူပါ နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ နယူးဇီလန်တွင် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ရယူပါ
နယူးဇီလန်မှ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းကူညီနိုင်မလား။
Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်သည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကနယူးဇီလန်၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိရန်အတွက်နယူးဇီလန်အတွက် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
နယူးဇီလန်အတွက် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရယူပါ နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ရယူပါ
နယူးဇီလန်မှ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ရယူရန်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းကူညီနိုင်မလား။
Forex ပွဲစားလိုင်စင်သည်နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီပါကနယူးဇီလန်၏ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရရှိခြင်းအတွက်နယူးဇီလန်အတွက် Forex Broker လိုင်စင်ဖြင့်သင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မည်။
နယူးဇီလန်အတွက် Forex ပွဲစားလိုင်စင်ရယူပါ နယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားပါ နယူးဇီလန်တွင် Forex ပွဲစားလိုင်စင်ရယူပါ
နယူးဇီလန်မှ fx လိုင်စင်ရယူရန်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းကူညီနိုင်မလား။
fx လိုင်စင်သည်နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကနယူးဇီလန်၏ fx လိုင်စင်ကိုလျှောက်ထားရန်နှင့်ရရှိရန်အတွက်နယူးဇီလန်အတွက် fx လိုင်စင်ဖြင့်သင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။
နယူးဇီလန်အတွက် fx လိုင်စင်ရယူပါ နယူးဇီလန်တွင် fx လိုင်စင်လျှောက်ထားပါ နယူးဇီလန်တွင် fx လိုင်စင်ရယူပါ
နယူးဇီလန်တွင်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။
နယူးဇီလန်၏ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုရရန်သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးရိုးသားသောစီးပွားရေးပုံစံရှိရန်လိုအပ်သည်၊ နယူးဇီလန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သောဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ရှေ့နေများသည်နယူးဇီလန်၊ အစိုးရရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်အားကူညီနိုင်သည် နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အခကြေးငွေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
နယူးဇီလန်တွင်ငွေရေးကြေးရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ်လည်းလူသိများသောနယူးဇီလန်တွင်ဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရရှိမည်နည်း။
နယူးဇီလန်၏ဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တတ်နိုင်သောဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်နယူးဇီလန်တွင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းပါကနယူးဇီလန်ရှိဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ နယူးဇီလန်တွင်ပံ့ပိုးပေးသူ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်ဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအားတတ်နိုင်သည့်နှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်ကူညီပေးသည်။
နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်လည်း Securities Dealers License ကိုလူသိများသော New Zealand မှာ Securities Dealers License ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးဇီလန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဈေးနှုန်းချိုသာသောရောင်းဝယ်သူများလိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပြည့်စုံပါကနယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ Securities Dealers များအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်ကူညီနိုင်သည်။ နယူးဇီလန်တွင်လိုင်စင်၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်သင့်တော်သောဈေးနှုန်းဖြင့်လျှောက်ထားရန်လည်းကူညီပေးသည်။
နယူးဇီလန်၌သင်၏ Securities Dealers License ကိုရယူပါ နယူးဇီလန်၌သင်၏ Securities Dealers License ကိုရယူပါ
နယူးဇီလန်တွင်လည်းလူသိများသောနယူးဇီလန်တွင် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရရှိမည်နည်း။
နယူးဇီလန်၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးဇီလန်ရှိ Forex Brokerage လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပြည့်စုံပါကနယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်၊ Forex Brokerage အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကူညီနိုင်သည်။ နယူးဇီလန်တွင်လိုင်စင်၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်နယူးဇီလန်၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
နယူးဇီလန်တွင်သင်၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရယူပါ နယူးဇီလန်တွင်သင်၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရယူပါ
နယူးဇီလန်မှာလည်း Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုနယူးဇီလန်မှာဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
နယူးဇီလန်၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးဇီလန်ရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပြည့်စုံပါကနယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ Forex လဲလှယ်မှုအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ နယူးဇီလန်တွင်လိုင်စင်၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်နယူးဇီလန်၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
နယူးဇီလန်တွင်သင်၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရယူပါ နယူးဇီလန်၌သင်၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရယူပါ
နယူးဇီလန်တွင်လည်းလူသိများသောနယူးဇီလန်တွင် Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရရှိနိုင်ပါသနည်း။
နယူးဇီလန်၏ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သော Forex Broker လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်နယူးဇီလန်ရှိလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်နယူးဇီလန်ရှိ Forex Broker လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ Forex Broker အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင့်အားကူညီနိုင်သည်။ နယူးဇီလန်တွင်လိုင်စင်၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်နယူးဇီလန်၏ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
နယူးဇီလန်တွင်သင်၏ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုရယူပါ သင်၏နယူးဇီလန်ရှိသင်၏ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုရယူပါ
နယူးဇီလန်တွင် FX လိုင်စင်ကိုနယူးဇီလန်တွင်မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။
နယူးဇီလန်၏ fx လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးဇီလန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော fx လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်လိုအပ်ပါကနယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ နယူးဇီလန်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကူညီပေးနိုင်သည်။ နယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ FX လိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်လည်းကူညီသည်။
နယူးဇီလန်တွင်သင်၏ fx လိုင်စင်ကိုရယူပါ နယူးဇီလန်တွင်သင်၏ fx လိုင်စင်ကိုရယူပါ
နယူးဇီလန်တွင်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုမည်သို့ရရှိမည်နည်း။
နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွက်ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုရရန်သင်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်နှင့်ရိုးသားသောစီးပွားရေးပုံစံရှိရန်နယူးဇီလန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သောငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ရှေ့နေများသည်နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
နယူးဇီလန်ဘဏ္financialာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တတ်နိုင်သောဘဏ္affordableာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူအတိုင်ပင်ခံများနှင့်နယူးဇီလန်တွင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းပါကနယူးဇီလန်ရှိဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ နယူးဇီလန်၊ နယူးဇီလန်တွင်ဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွက်ငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအတွက်တတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်လည်း Securities Dealers License ကိုနယူးဇီလန်တွင်ရရှိသော Securities Dealers License ကိုဘယ်လိုရယူရမလဲ။
နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers လိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော Securities Dealers လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်နယူးဇီလန်ရှိလိုင်စင်ရ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းလျှင်နယူးဇီလန်ရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်။ နယူးဇီလန်၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers License အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ Securities Dealers License ကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
နယူးဇီလန်၌ကျွန်ုပ်၏ Securities Dealers License ကိုရယူပါ နယူးဇီလန်၌ကျွန်ုပ်၏ Securities Dealers License ကိုရယူခြင်း
နယူးဇီလန်တွင်လည်းလူသိများသောနယူးဇီလန်တွင် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုမည်သို့ရယူမည်နည်း။
နယူးဇီလန် Forex Brokerage လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရရှိနိုင်ပါကနယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ Forex Brokerage လိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုကူညီနိုင်လိမ့်မည်။ နယူးဇီလန်၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်နယူးဇီလန်၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်သင့်အားကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်၏နယူးဇီလန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရယူပါ နယူးဇီလန်၌ကျွန်ုပ်၏ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ကိုရယူခြင်း
နယူးဇီလန်တွင်လည်း Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုနယူးဇီလန်တွင်ရရှိနိုင်ပါသလား။
နယူးဇီလန် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သော Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်နယူးဇီလန်ရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အစိုးရ၏အခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကူညီပေးနိုင်သည်။ နယူးဇီလန်၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်နယူးဇီလန်၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်လည်းကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုနယူးဇီလန်တွင်ရယူပါ ကျွန်ုပ်၏ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုနယူးဇီလန်တွင်ရယူခြင်း
နယူးဇီလန်တွင်လည်းလူသိများသောနယူးဇီလန်တွင် Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုမည်ကဲ့သို့ရယူမည်နည်း။
နယူးဇီလန် Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သော Forex Broker လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်နယူးဇီလန်ရှိလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်နယူးဇီလန်ရှိ Forex Broker လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ Forex Broker လိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများ နယူးဇီလန်၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex ပွဲစားလိုင်စင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်နယူးဇီလန်၏ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုတတ်နိုင်သောနှုန်းထားဖြင့်လျှောက်ထားရန်လည်းကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်၏ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုနယူးဇီလန်တွင်ရယူပါ ကျွန်ုပ်၏ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကိုနယူးဇီလန်တွင်ရယူခြင်း
နယူးဇီလန်တွင် fx လိုင်စင်ရရှိခြင်းကိုနယူးဇီလန်တွင်မည်သို့သိနိုင်သနည်း။
နယူးဇီလန် fx လိုင်စင်ရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးဇီလန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏တတ်နိုင်သော fx လိုင်စင်ရအတိုင်ပင်ခံများနှင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်ရရှိနိုင်ပါကနယူးဇီလန်ရှိ FX လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်၊ နယူးဇီလန်ရှိအစိုးရလိုင်စင်အတွက်အစိုးရအခကြေးငွေများနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုကူညီနိုင်သည်။ နယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင်အတွက်နှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွက်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် fx လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်ကူညီပေးသည်။
ကျွန်ုပ်၏ fx လိုင်စင်ကိုနယူးဇီလန်တွင်ရယူပါ နယူးဇီလန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ fx လိုင်စင်ရယူခြင်း
နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ၀ န်ဆောင်ခများသည်အဘယ်နည်း။
နယူးဇီလန်ရှိနယူးဇီလန်ဘဏ္financialာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အဓိကကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အထူးအကူအညီအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အခကြေးငွေများဟုလည်းလူသိများသောနယူးဇီလန်ရှိဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ။
နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ဝန်ဆောင်ခများ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အခကြေးငွေ | နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အခကြေးငွေများ
နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers License အတွက်လူသိများသောနယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ Securities Dealers License ၏ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ။
နယူးဇီလန်ရှိလုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိလုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်ခ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အခကြေးငွေ | နယူးဇီလန်ရှိလုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိလုံခြုံရေးအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များလိုင်စင်ခ
နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်လည်းလူသိများသောနယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ။
နယူးဇီလန် Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဤစာမျက်နှာ၏နိဒါန်းအပိုင်းတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ခ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အခကြေးငွေ | နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်ခ
နယူးဇီလန်ရှိ Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်နယူးဇီလန်လဲလှယ်မှုလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာလည်းဘာလဲ။
နယူးဇီလန် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဒီစာမျက်နှာ၏နိဒါန်းတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ခ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အခကြေးငွေ | နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်ခ
နယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်အတွက်အခကြေးငွေဟုလည်းလူသိများသောနယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ။
နယူးဇီလန် Forex ပွဲစားလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုဤစာမျက်နှာ၏နိဒါန်းအပိုင်းတွင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။
နယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကြေး နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အခကြေးငွေ | နယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်ကြေး
နယူးဇီလန်ရှိ FX လိုင်စင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်းနယူးဇီလန်တွင်ကုန်ကျငွေကဘာလဲ။
နယူးဇီလန်ရှိ FX လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်ရှိ FX လိုင်စင်ခ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၏အခကြေးငွေ | နယူးဇီလန်ရှိ FX လိုင်စင်၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင်ခ
နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၏ကုန်ကျစရိတ် | နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အခကြေးငွေများ
အရေးကြီးသောအသုံးအနှုန်းများ - နယူးဇီလန်တွင်ဘဏ္Financialာရေးလိုင်စင်ချထားပေးခြင်း
နယူးဇီလန်ပါလီမန် အတွက် ခွဲဝေဥပဒေကြမ်းများ၏ဇယား နှင့် တင်သွင်းပါ
အောက်လွှတ်တော် ၁၈၅၄-၂၀၀၄ နယူးဇီလန်နိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်
Fast500 - Deloitte Asia Pacific Technology Fast 500 ကရှင်းပြသည်
နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်များနှင့် ၀ န်ကြီးချုပ်များ
နယူးဇီလန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းညွှန် - ပြည့်စုံသောနယူးဇီလန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းညွှန်
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုများ - NZTG အောင်မြင်ခဲ့သည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆုအကြောင်းဖတ်ပါ
ရောင်းရန်ခရီးသွားလုပ်ငန်း - စီးပွားရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်စရာများ
နယူးဇီလန်ခရီးစဉ်လမ်းညွှန် - ပြည့်စုံသောနယူးဇီလန်ခရီးစဉ်လမ်းညွှန်
နယူးဇီလန်ပြဌာန်းချက်စည်းမျဉ်းများ 1936-2007 သမိုင်းဆိုင်ရာပြဌာန်းစည်းမျဉ်းများအတွက်
ခရီးသွားအာမခံ - World Nomads သည်ခရီးသွားအာမခံအထူးကုများ
NZTG YouTube - ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအော်ပရေတာများသည်အသံကိုပြသခဲ့သည်
ရောင်းရန်နယူးဇီလန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ - အထွေထွေစီးပွားရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရွေးချယ်စရာများ
တရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဘယ်လိုရယူမလဲ - တရားရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များအွန်လိုင်း
တရုတ္ - ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတရုတ်ဘာသာဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း
ပစိဖိတ်ကျွန်းများခရီးသွားလာရေးလမ်းညွှန် - ခရီးသွားလာရေးနှင့်ခရီးသွားလာရေးသတင်းအချက်အလက်များ
Hitwise - Hitwise (Experian) မှကျွန်ုပ်တို့ရရှိသော ၀ က်ဘ်ဆိုက် ၁၀ ခုကိုကြည့်ပါ
အလုပ်သမား ဦး စီးဌာန (www.dol.govt.nz)
နယူးဇီလန်ခရီးသွားလမ်းညွှန် - နယူးဇီလန်ခရီးသွားခြင်း၏အထွေထွေလမ်းညွှန်
ဂျပန် - ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဂျပန်ဘာသာဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း
ထိပ်တန်းခရီးသွားလုပ်ငန်း site ဆု - နယူးဇီလန်၏ထိပ်တန်းခရီးသွားဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့အပတ်စဉ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆု
အဖြူရောင်စာမျက်နှာများ - နယူးဇီလန်နှင့်နယူးဇီလန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လမ်းညွှန်
နယူးဇီလန်နေရာထိုင်ခင်းလမ်းညွှန် - ပြည့်စုံသောနယူးဇီလန်အတွက်နေရာထိုင်ခင်းလမ်းညွှန်
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ကြီးဌာန (www.med.govt.nz)
သြစတြေးလျခရီးသွားလာရေးလမ်းညွှန် - ခရီးသွားလာရေးနှင့်ခရီးသွားလာရေးသတင်းအချက်အလက်များ
အဝါရောင်စာမျက်နှာများ - နယူးဇီလန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လမ်းညွှန်
နယူးဇီလန်သည် ၁၈၄၁-၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ပြဌာန်းထားသည့်စုဆောင်းမှု သမိုင်းဝင်ဘို့
နယူးဇီလန်ဆွဲဆောင်မှုလမ်းညွှန် - ပြည့်စုံသောနယူးဇီလန်ဆွဲဆောင်မှုလမ်းညွှန်
NZ ခရီးသွားသတင်းလွှာများ - ပုံမှန်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ခရီးသွားလာခြင်းဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများအတွက်စာရင်းပေးသွင်းပါ
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဘဏ် ၄၇၁ ခုအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားများအတွက်ဘဏ်ဝန်ဆောင်မှုများ။
နယူးဇီလန်ရှိမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆိုဘဏ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအတွက်နယူးဇီလန်တွင်အကောင်းဆုံးဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အထောက်အပံ့။
နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်နယူးဇီလန်၏လိုအပ်ချက်များ၊ အခကြေးငွေများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ ကန ဦး အပ်ငွေစသည်ဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည်။
နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည်နယူးဇီလန်အတွက်ဘဏ်အကောင့်အောင်မြင်မှုနှုန်းနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရောင်းချပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးဇီလန်ရှိဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေနေသောတစ် ဦး ချင်းနှင့်စီးပွားရေးသမားများအတွက်နယူးဇီလန်၌အကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
နယူးဇီလန်အတွက်ကုန်းတွင်းနှင့်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်နယူးဇီလန်တွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်သင့်အားသင်၏ဘာသာစကားကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးဇီလန်နိုင်ငံအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံနှင့်ဘဏ်ပေါင်း ၄၇၂ ခုအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းပံ့ပိုးမှုများပေးလျက်ရှိသည်။
နယူးဇီလန်၏အကောင်းဆုံး Forex လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အခမဲ့အကြံပေးခြင်း၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ နယူးဇီလန်တွင် Forex လိုင်စင်၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှု၊ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိဘဏ္serviceာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်ရှိငွေကြေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွင်ဘဏ္serviceာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၊ နယူးဇီလန်ရှိငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များရောင်းဝယ်သူများ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်တွင်ရောင်းဝယ်ရေးလိုင်စင်၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံရှိ Securities Dealers လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ Se အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ curities နယူးဇီလန်ရှိကုန်သည်များလိုင်စင်၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex အကျိုးဆောင်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex လဲလှယ်ခွင့်လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ Forex အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ နယူးဇီလန်တွင်လိုင်စင်လဲလှယ်ခြင်း၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex ဖလှယ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ၊ နယူးဇီလန်တွင် Forex ဖလှယ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်၏အကောင်းဆုံး Forex ပွဲစားလိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှု၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ Forex အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ နယူးဇီလန်တွင်ပွဲစားလိုင်စင်၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ Forex ပွဲစားလိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးဥပဒေကုမ္ပဏီများ နယူးဇီလန်ရှိ Forex Broker လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်တွင်အကောင်းဆုံး fx လိုင်စင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင်အတွက်ရှေ့နေများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ FX လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအတိုင်ပင်ခံ၊ နယူးဇီလန်ရှိ FX လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပေးများ၊ နယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင်အတွက်၊ နယူးဇီလန်ရှိ fx လိုင်စင်အတွက်အကောင်းဆုံးရှေ့နေများသည်လည်း။
နယူးဇီလန်၊ ဘဏ္servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက်အခွင့်အာဏာပေးခြင်း။ ဘဏ္Servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုအာဏာပိုင် နယူးဇီလန်၏